Ụlọ nke Finist
Ogige Finist bụ nke iri na abụọ na Svarog Circle. Ọ na - amalite na Mee 29 wee kwụsị na June 20. E weere osisi dị nsọ nke oge a ka ọ bụrụ cherry. Onye na-elekọta Ụlọ Nzukọ ahụ bụ chi Vyshen, onye na-eche nchedo Sveti Navi. Ọrụ ya gụnyere njikwa nke Ọganihu Ime Mmụọ na nchebe nke Iwu Eluigwe.
Ihe Ụlọ Nzukọ Finist pụtara maka mmadụ
Ndị a mụrụ n'oge a bụ ndị a ma ama site n'ọrụ ha na ọchịchọ ọ bụla maka ọrụ ọ bụla. Na ike ha ịrụ ọtụtụ ihe aga-eme n'otu oge, na niile ekele maka arụmọrụ dị elu. "Ogwugwu" enweghi ike itukwu n'otu ebe, ya mere, ha na-ele anya mgbe niile. Ike ha zuru ezu iji gbanwee ụwa gbara ha gburugburu. A mụrụ na oge nke Ụlọ Nzukọ a nke ndị nwere mmasị dịgasị iche iche, mana ndị ọzọ agaghị ebute ha. Nraranye ha nwere ike ịbụ naanị anyaụfụ, n'ihi na nsogbu ma ọ bụ ọdịda enweghị mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ihe ọrụ ahụ adịghị mma, mgbe ahụ, "Ndị Nkwụsị" nwere ike ịmalite ọzọ. Ha na-edozi usoro ha, ma n'otu oge ahụ, ha na-achọ ịdabere na nzụlite nke ọma . "Finistov" adịghị emetụta n'ụzọ ọ bụla site n'aka ndị ọzọ, dị ka ha nwere ike isi mee. Ha nwere nnukwu ihe okike. Ọ dị mma ịkọwapụta àgwà ọjọọ nke ndị dị otú ahụ, dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ime mgbanwe na mberede na ọnọdụ.
Ihe amara nke "Ụlọ Nzukọ Finist"
A na-atụ aro na nke a bụ maka ndị na-abụghị ndị nwere obi ike, ọ bụghị ndị siri ike ma ọ bụ ndị ezi uche. Site n'enyemaka ya, mmadụ na-akpachara anya ma nweta nkà maka ịmatakwu ndụ. Ọnwụ na amulet "Ụlọ Nzukọ Finist" na-enyere gị aka ịnagide mmezigharị na ịghara ịgbasasị. Site n'enyemaka ya, nwoke na-enweta ume iji nweta ihe mgbaru ọsọ ya . Ihe amara na-echebe mmepe ime mmụọ, na-enye ike ma na-enye gị ohere inweta izu okè.
Ógbè ọjọọ nke ụwa
Ịgba ohu - gini bụ ya, onye bụ onye na-achụpụ onwe ya na ihe ọ na-eme?
Nzuzo nke mbara ala - ihe ndị na-adọrọ mmasị, ọ bụ na mbara ụwa na-emetụta mmadụ?
Chi nwanyị Ishtar - akụkọ banyere chi nwanyị nke ịhụnanya na akụkọ ifo Akkadian
Kedu otu esi akpọ Chineke?
Ụdị Bat - Bara Uru
Ndị mmụọ ozi dara na Iso Ụzọ Kraịst na otu esi eme ka mmụọ ozi ahụ dara ada daa?
Kedu ka esi ejide aka?
Circle hell site Dante - atụmatụ nke ndụ mgbe ndụ nke ndị mmehie
Nkwupụta nke ọnwụ
Ime Anwansi Na Na Na
Na-enyefe eziokwu ma ọ bụ akụkọ ifo?
Chineke Lada na akụkọ ifo Slavic - esi ekpe ekpere chi nwanyị nke ima na mma?
Ngosiputa Ngwa Ọhụrụ 2014
Mbadamba polymer na venda
National Gallery nke Art (Jakarta)
Owu na àgwà
Novo-Passit na ịzụ nwa
Kedu ka esi tufuo ísì nke ajirija na akpụkpọ ụkwụ gị?
Celine Dion adịghị njikere maka mmekọrịta ọhụrụ
Ụdị ihe atụ nke mara mma
Ogige oyi na ụlọ gị aka gị
Spain, Salou - ebe nkiri
Psoriasis - ihe mgbaàmà nke oria na ngosipụta dị iche iche
Sneakers Lakost - esi mara ọdịiche dị na nke mbụ site na adịgboroja?
Nsogbu nke ịkwadoro ụmụaka
Kedu otu esi eme ka orchid mmiri?
Kedu esi esi nri tomato seedlings mgbe ị na-ebu?
Iko maka ihu oval